Music bụ ihe kasị ebube na-atọ ụtọ onyinye na Chineke nyere ụmụ mmadụ. Ọ calms na agitations nke mkpụrụ obi na-apụta otu banye n'ime ụwa ọhụrụ nke nkasi obi n'agbanyeghị oké ifufe ná ndụ. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile music nwere ike nweta dị otú ahụ a-akpali akpali mmetụta dị ka ụfọdụ nwere ike imebi ihe. Gospel music kwubara top n'etiti Genres na na-mara tie ọkụ si n'obi mmadụ na-eme ka anya mmiri si n'anya a nwaanyị. Ebe ọ bụ na ala nke Kraịst ọtụtụ gospel songs e dere site dị iche iche artists. A bụ ndepụta nke n'elu iri gospel artists.
Kirk Franklin a mụrụ ya na Jan 26, 1970 na Texas USA na-eto dị ka otu n'ime top American Gospel Abù. Ọ mụrụ music na Oscar Dean Wyatt High School emesia tọrọ ntọala a gospel ìgwè, The obi umeala, nke e dekọrọ ya mbụ mejupụtara wee ya uche nke onye gospel music mgbe ochie na ụfọdụ renown na ozioma music ụlọ ọrụ. Ọ natara ọtụtụ enọ gụnyere Seven Grammys, Iri na atọ GMA Nduru Awards na iri na ise stellar Awards. Ọ maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
The oké ifufe dị n'elu ugbu a.
Ndụ m bụ na aka gị.
Michael W Smith a mụrụ ya na October 7, 1957 na West Virginia USA na-gosiri n'etiti n'elu American gospel egwú nwere mmasị ọtụtụ Mmeri ke Oziọma arena. Ọ malitere ya music ọrụ na 1981 na site 1991, o rere ihe karịrị 18 nde albums. Na omenka ndibọhọ 3 Grammy awards, 40 Nduru enọ na na ASCAP ọdịda ya "Golden Cheta 'award maka ndụ oge nweta. Ọ maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
Imeghe anya nke obi m
N'elu ihe nile
Obi na-efe ofufe
Lee, m na-efe.
Don Moen bụ An American gospel omenkà, songwriter, pastọ na-emeputa. A mụrụ ya na June 29, 1950 na Minneapolis, Minnesota USA. Ọ bụ a ndụ egwú Terry Iwu ministri. Ya music comprises a ngụkọta ire ere nke n'elu nde ise nkeji. Ọ maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
Chineke ga-eme a ụzọ
M ga-abụ abụ
Cece Winams bụ ihe American gospel na-agụ egwú bụ onye a mụrụ 8th October, 1964 Michigan, USA Ọ ndibọhọ ọtụtụ enọ gụnyere iri Grammy Awards Asaa stellar Awards. Ọ bụ onye a ma ama na-agụ egwú bụ onye rere n'elu 12 nde ndia n'ụwa nile na-ghọtara dị ka otu n'ime bestselling nwanyi gospel artist niile oge. Ọ maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
Mmụọ Nsọ-abịa jupụta n'ebe a.
M hụrụ ịhụnanya
Jesus Ị mara mma.
Onye na-ese bụ n'etiti ndị 'kasị mma nwoke gospel na-agụ egwú nke gara aga iri afọ abụọ.' Ya songs na ndị agadi hymns ga gosiri na nke a. A mụrụ ya na November 9, 1959 na Copiague, New York. Na omenka ndibọhọ atọ Grammy awards, 10 stellar awards, 2 nzọ awards, 2 mkpụrụ obi Train awards na otu NAACP image award. Ọ maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
Great bụ gị ebere
M na-akpọ gị kwesịrị ntụkwasị obi
Sandy Patty a mụrụ ya na July 12, 1956 na hails si Oklahoma City ke USA Ọ bụ a pianist, na-agụ egwú na-ede akwụkwọ. Sandy a zụlitere ezinụlọ nke egwú na ahụ bụ otú ọ mepụtara ya na-abụ abụ ọrụ. Ya ọrụ na-eto n'ihu ke emeri abụọ GMA Nduru Awards, nọgidere na-amụba ma ugbu a, na-agụnye ndị dị otú ahụ Genres dị ka pop egwu egwú gafee ụwa. Ọ na-emepụta a ọnụ ọgụgụ nke albums na a maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
Olee otú ebube bụ aha gị
N'elu oké nkume a
Nọ n'iru ya
Fred Hammond a mụrụ ya na December 27, 1960 na Detroit, Michigan USA Ọ bụ n'elu gosiri gospel musician onye anọwo ọrụ ma dị ka onye so na gospel n'ịrụ ìgwè ma a solo-ese. Ọ ndibọhọ nduru Awards 1992, 1998, 1999 na 2000 nakwa ndibọhọ stellar Awards ke 2001 na 2005. Ọ a maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
Mgbe mmụọ nke Onyenwe anyị
Jehova otú m hụrụ gị n'anya
A song nke Ike.
Yalonda Adams bụ ihe American site si na a mụrụ ya na August 27, 1961 Houston, Texas na United States. Ya music Genres nkejikotara nke Gospel, R & B na mkpụrụ obi music. Onye na-ese bụ a na-agụ egwú, Record-emeputa, omee na redio usu. Ya music-aga n'ihu na-eme nke ọma ma rekwa fọrọ nke nta karịrị nde asatọ albums ụwa. Ọ maara nke ọma na ndị na-esonụ gospel Hits:
Mepee obi m
The agha bụ nwenụ
N'etiti ya niile.
Onye na-ese egosiwo onye pụtara ìhè arụmọrụ ka gospel ụlọ ọrụ. Di iche iche nke olu ya na nkwa Jehova hụrụ ya hapụ albums na ezi music. David a mụrụ ya na October 21, 1969 .Ọtụtụ Christian albums e wepụtara site na-ese ma nakwa agba na ndị ọzọ artists arụ ọrụ. Ọ bụ ya bụ onye kwara gospel ọgụ egwu na a maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
Ka ebube ridata
Gentle onye nzọpụta
Ọ dị ndụ.
O Nsọ Night
Kim Burrell bụ ihe ọhụrụ ndị ahịa ọ sonyeere n'afọ 1989.However; ọ bụ n'etiti n'elu gospel egwú, ekele ya na-akwanyere ùgwù olu na genre. Na omenka-agba na MTV si ọkara awa pụrụ iche 'site Church na Chart. Ya music mmetụta agbasawo n'ọtụtụ ebe na ya album "The Ịhụnanya" bụ ọnụ ọgụgụ 5 na chaatị na 2011. Ọ na-ọma mara ndị na-esonụ Hits:
N'elu na n'elu ọzọ
M na-abịa gị karịa m na-enye.
> Resource> Top List> Top Iri Gospel Artists